Waxaa xaqiiqo ah in dhalashada qaabab kala duwan leeyihiin faa'iido iyo khasaare kala duwan oo ay sabab la mid ah sidoo kale waa in la ogaadaa in user waa in aan kaliya ka heli qaab fiican lakiin sidoo kale waa in la hubiyo in mid ka mid ah la doortay aan la ciyaaray kaliya in a hab macquul ah, laakiin qalabka waxaa loo baahan yahay in sidoo kale ay jiraan si loo caawiyo dadka isticmaala ay dhacdo in wax kasta oo arrinta iyo dhibaato.
Jawaab su'aasha sakhiray
Waa in aad e xusay in barnaamijka ay tahay in la isticmaalo arrintan la xiriira waa FCPX in loogu badalo yaabaa video AVCHD ama xabbad la xiriira macluumaadka ayaa la keydiyaa drive adag. Xogta waxaa marka hore in la soo guuriyeen iyo user waa in la hubiyo in suuqa kala dejinta FCPX waxa loo isticmaalaa oo xusi lahaa xogta ay tahay in la soo dhoofiyo barnaamijka sameeyo. Waxaa jira kuwo fursadaha in aan la heli karin in FCPX mar uu furmo suuqa dhoofinta ayaa laga furay oo hal fursad oo kale waa in user ma uncheck karaan warbaahinta nuqul doorasho inay fayl dhacdooyinka iyo ku habboon yahay in ay arrinta in barnaamijka akhriya gaaro sida haddii waxa uu ahaa kaarka. Haddii doorasho la sameeyo laga heli karaa markaas waxa ay ka dhigan tahay in footage la labalaabka doono iyo waxa ku jira loo roggi lahaa gidigood haystaan ​​taas oo kordhin lahaa cadaadiska saaran nidaamka. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in la hubiyo in footage in la keeno si ay FCPX uu u muuqdo sidii shaxanka hoose ka dhigi. Halkan been tayada kale ee FCPX ah oo ay tahay in footages in lagu daray interface ka sii ama aad joogto diyaarin iyo sabab la mid ah, waa in la ogaadaa in user waa in la hubiyo in amarka clips la hubiyaa ka hor dhigi waxay keeno si interface si looga fogaado arin kasta.
Keenista vs. Transcoding (ama Rewrapping)
Wixii talaabadan Wondershare Video Converter Ultimate for Mac waa xalka kama dambaysta ah oo hubiyo in ugu fiican ayaa loo gudbiyey in dadka isticmaala oo aan wax arrintan oo dhibaato ka dhigi lahaa. Barnaamijku waxa uu la soo saaro hab ugu fiican si loo hubiyo in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah natiijooyinka tahay oo aan madax kasta. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in la hubiyo in ugu fiican ayaa la siiyaa si ay u Mac iyo arrinta sakhiray soo degsado barnaamijkan sameeyo. The Wondershare Video Converter Ultimate for Mac dhoofista ma aha oo kaliya xogta Meta oo dhan, laakiin waxa ay sidoo kale hubineysaa in user weli uu meel iyo inta kale ee geedi socodka ayaa lagu qaaday barnaamijka si aad u hesho arrinta la xalin sida ugu dhaqsaha badan. Sidoo kale waa mid ka mid ah hababka ugu fiican si loo hubiyo in user helo natiijada ugu wanaagsan oo arrinta sababtay loo xalin lahaa in barnaamijyada dhaqanka la joogo in dadka isticmaala ay. Sidaas darteed waa soo jeedinaya in la soo qiimeeyaa mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan oo rating ee barnaamijka waa wax muujinaysaa wax walba oo laftiisa. Waxaa sidoo kale in la xuso in user ma aha oo kaliya ay heli doonaan adeegyada ugu fiican ee arrintan la xiriira, laakiin dadka isticmaala farsamada oo aan sidoo kale ka heli doonaa faahfaahinta sida ugu wanaagsan ee barnaamijka waa mid aad u fududahay in la isticmaalo iyo arrimaha adag lahayn kuwo ka helay arrintan la xiriira. Dhamaan dadka isticmaala kuwa diidan in la isticmaalo barnaamijkaan waxaa lagula talinayaa inaad kala soo baxdo nuqul maxkamadda ka URL http://www.wondershare.com/mac-video-converter-ultimate/guide.html iyo is beddeleen go'aan hubaal.
Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in la hubiyo in ugu fiican in la siiyo nidaamka iyo OS iyo sabab la mid ah waxaa lagula talinayaa in ay helaan habab in ay yihiin online si loo hubiyo in arrinta la xalin sakhiray ku samaysaa oo tutorial this ku salaysan yahay. Waxaa sidoo kale in la xusay in dadka isticmaala ay tahay in ay hubiyaan in nidaamka uu soo sheegnay ee URL waa http://daredreamermag.com/2013/06/04/importing-avchd-video-into-fcpx/ waxaa la socda oo ay doonaynin waxaa sidoo kale lagu sharxay hab fudud si loo hubiyo in dadka isticmaala ay u helo adeegyada ugu fiican oo aan wax arrintan iyo dhibaato. Waxaa jira talooyin gaar ah in arrintan la xiriira iyo user waa in la hubiyo in kuwaas la raacay si ay u hubiyaan in natiijada waafaqsan yihiin shuruudaha dadka isticmaala ku sameeyo. Waxaa sidoo kale in la xuso in dadka isticmaala ay tahay in ay hubiso in convertor ugu wanaagsan ee loo isticmaalo in arrintan la xiriira si loo hubiyo in arrinta la xalin sameeyo iyo natiijada waa xiddig.
Waa in la ogaadaa in user waa in la hubiyo in convertor in la doortay ma aha oo kaliya fududahay in la isticmaalo, laakiin user sidoo kale helo natiijooyinka ugu fiican iyadoo la isticmaalayo sida convertor ugu wanaagsan ee la sameeyo waxaa ka mid ah taas oo ka dhigaysa hubiyo in user ka helo ugu wanaagsan oo gobolka ka mid ah natiijooyinka tahay in arrintan la xiriira ka. Geedi socodka oo user a Sidoo kale waa in la raaco waxaa ka mid ah tallaabooyinka qaar laga yaabo cusub u isticmaala kuwa aan ahayn farsamo ee dabiiciga ah iyo sabab la mid ah, waa in la ogaadaa in user waa in la hubiyo in tallaabooyin waxaa si fiican loo fuliyay oo codsatay iyo haddii sameeyo ay dhacdo in uu jiro wax arrin ama dhibaato soo food halka markaas iyaga codsanaya waxaa lagula talinayaa in ay hubiyaan in user waa in ay qaataan iyo khabiir gacanta arrintan la xiriira si loo hubiyo in hannaanka marna ma qaldamaan oo weli wadada. Haddii user wali arin kasta markaas forums online in la adeegsadaa waa in la hubiyo in user helo natiijooyinka ugu fiican waqti gudaha iyo mar kale wax soo saarka waa sida ugu fiican ee ugu fiican. Marka ay timaado qaab AVCHD ka dibna waxaa jira waxyaabo gaar ah in ay tahay in la xuso in qaabka loo sameeyay by Sony oo Panasonic Corporation iyo qaab-dhismeedka waa mid aad u adag tahay in la raaco sida video iyo xogta la xiriira waa mid aad u badan ku hoos caqabado ah in ayaa la abuuray by qaab iyo resultantly user marnaba helo xogta iyo qaybaha kale ee la xiriira fudud iyo straightforwardly.
> Resource > FCP > Sida loo soo dhoofsadaan AVCHD in la dhimo final x pro on Mac?